နိုင်ငံခြားသား အယာင်ဆောင်ကာ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို အသုံးပြုပြီး အကြီးအကျယ် ငွေလိမ်မှု ~ Myanmar Online News
နိုင်ငံခြားသား အယာင်ဆောင်ကာ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို အသုံးပြုပြီး အကြီးအကျယ် ငွေလိမ်မှု
1:31 AM မှုခင်းသတင်း No comments
နိုင်ငံခြားသား အယာင်ဆောင်ကာ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို အသုံးပြုပြီး ရိုးသားတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို အကူအညီတောင်းခံသလိုနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ငွေအကြီးအကျယ်လိမ်ယူသွားတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို ငွေလိမ်ခံရသူရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူမှ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေ ရင်ဖွင့် ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်သည် ကာယကံရှင်မိသားစုကိုယ်တိုင်က ရှက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာ သိသော်လည်း အခြားသူများအားလုံးကို သူတို့ မိသားစုလို ယခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုးဖြင့် အလိမ်မခံရစေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အများကဲ့ရဲ့ချင်လည်း ကဲ့ရဲ့ပါစေဆိုပြီး သတ္တိမွေးကာ တင်ပြထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်မှာ 4.11.2019. အကြီးအကျယ်အလိမ်ခံရခြင်းနိုင်ငံခြားသားအယာင်ဆောင်ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အသုံးပြုပီး Under UN Delivery Company ကနေပါဆယ်ပို့မယ်ဆိုပီး တန်ဆန်ခအနေနဲ့ ပထမအကြိမ် 8 သိန်းကျပ်တောင်းပါတယ် 15 မိနစ်ကြာသောအခါ ဒေါ်လာပမာဏအလွန်များသောကြောင့် အစိုးရကို အခွန် 31 သိန်းထပ်တောင်းပါသည် ရုံးချိန်အမှီ1နာရီအတွင်း (ဘုန်းနေမင်း / Phone Nay Min) acc ထဲသို့ထည့်ပေးလိုက်ရပါသည် နောက်ထက်မိနစ်20 ကြာသောအခါ 75 သိန်းထပ်မံလွှဲခိုင်းပါသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာ အစိုးရအခွန်ခမှာ 4% ပေးရမည်ဟုပြောပါသည် Delivery ph မှာ 09 763630917 စာရေးမအရောင်ဆောင်ပြီး လိမ်လည်တောင်းရမ်းသူရဲ့ ph ဖြစ်ပါတယ်
လူလိမ်ရဲ့အားသာချက်မှာ တစ်ခုလက်၊ မုဆိုးမ single များကိုသားကောင်အဖြစ်ရွေးချယ်နေပါသည်။ အောက်မှာပုံနှင့်တကွပါရှိပါသည်။
ကျမတို့ကို အဖိုးတန်လက်ဆောင်များထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပီး ပုံတွေပို့ပါသည်။ လေဆိပ်သို့ရောက်ရင် တန်ဆာခအနည်းငယ်သာ ပေးဆောင်ရမည်ဟုပြောပါသည်။ ဒီအကြောင်းကို အသေးစိတ်သိလိုလျှင် အန်တီဆီကို (09 797565694) အချိန်မရွေးဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်"ဆိုပြီး ရေးသားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်သံဖိုင်ကို မကြာခင် ဝေမျှပေးသွားပါမည်။
နိုင်ငံခြားသား အယာင်ဆောင်ကာ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို အသုံးပြုပြီး ရိုးသားတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို အကူအညီတောင်းခံသလိုနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ငွေ အကြီးအကျယ်လိမ်ယူသွားတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို ငွေလိမ်ခံရသူရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူမှ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေ ရင်ဖွင့် ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်မှာ 4.11.2019. အကြီးအကျယ်အလိမ်ခံရခြင်းနိုင်ငံခြားသားအယာင်ဆောင်ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အသုံးပြုပီး Under UN Delivery Company ကနေပါဆယ်ပို့မယ်ဆိုပီး တန်ဆန်ခအနေနဲ့ ပထမအကြိမ် 8 သိန်းကျပ်တောင်းပါတယ် 15 မိနစ်ကြာသောအခါ ဒေါ်လာပမာဏအလွန်များသောကြောင့် အစိုးရကို အခွန် 31 သိန်းထပ်တောင်းပါသည် ရုံးချိန်အမှီ1နာရီအတွင်း (ဘုန်းနေမင်း / Phone Nay Min) acc ထဲသို့ထည့်ပေးလိုက်ရပါသည် နောက်ထက်မိနစ်20 ကြာသောအခါ 75 သိန်းထပ်မံလွှဲခိုင်းပါသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာ အစိုးရအခွန်ခမှာ 4% ပေးရမည်ဟုပြောပါသည် Delivery ph မှာ 09 763630917 စာရေးမအရောင်ဆောင်ပြီး လိမ်လည်တောင်းရမ်းသူရဲ့ ph ဖြစ်ပါတယ်
လူလိမ်ရဲ့အားသာချက်မှာ တစ်ခုလက်၊ မုဆိုးမ single များကိုသားကောင်အဖြစ်ရွေးချယ်နေပါသည်။ အောက်မှာပုံနှင့်တကွပါရှိပါသည်။
ကျမတို့ကို အဖိုးတန်လက်ဆောင်များထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပီး ပုံတွေပို့ပါသည်။ လေဆိပ်သို့ရောက်ရင် တန်ဆာခအနည်းငယ်သာ ပေးဆောင်ရမည်ဟုပြောပါသည်။ ဒီအကြောင်းကို အသေးစိတ်သိလိုလျှင် အန်တီဆီကို (09 797565694) အချိန်မရွေးဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်"ဆိုပြီး ရေးသားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။